Taliska Ciidamada Mareykanka oo sheegay in duqeyn cirka ah ay la beegsadeen Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Taliska Ciidamada Mareykanka oo sheegay in duqeyn cirka ah ay la beegsadeen...
Taliska Ciidamada Mareykanka oo sheegay in duqeyn cirka ah ay la beegsadeen Al-Shabaab
Kuunyo-Barrow (Halqaran.com) – Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa faah faahin ka bixiyay illaa saddex weerar oo dhinaca cirka ah, oo lala beegsaday laba goobood oo Shabaabka ka hawlgalaan.
Ka dib weerarkii maalintii Sabtida ka dhacay Magaalada Muqdisho ayuu Taliska Mareykanka ee Qaaradda Afrika sheegay inay qaadeen saddex hawlgal, oo laba ka mida hal goob laga fuliyay.
Qoraal uu soo saaray Taliska AFRICOM ayaa lagu sheegay in Deegaanka Kuunyo Barrow laga fuliyay laba hawlgal, iyadoona lagu dilay saddex ka mid ah mintidiinta Al Shabaab.
Qoraalka ayaa lagu xusay hawlgalka saddexaad oo ka dhacay Deegaanka Caliyow Barrow in lagu qaarajiyay xubin kale oo Shabaabka ka tirsanaa.
Weeraradan ka dhanka ah Ururka Al Shabaab oo ka dhacay Gobolka Shabellaha Hoose ayaa la sheegay in sidoo kale lagu burburiyay laba ka mid ah gaadiidka Shabaabka.
Militariga Mareykanka ayaa ballaariyay weerarada dhanka cirka ee ka dhanka ah Al Shabaab, tan iyo markii uu xafiiska qabtay Madaxweyne Donald Trump.
Ismiidaaminta ka dhacday Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 87 qof, halka 148 kalena ay ku dhaawacantay. Mid ka mid ah dadka geeriyooday ayaa xalay dhaawacii qaraxaasi ka soo gaaray ugu geeriyootay Magaalada Ankara, wax yar uun ka dib markii ay ka cago dhigatay diyaaraddii ay la socotay. Haweeneydan ayaa lagu magacaabi jiray Amina Cismaan Khayre.
Deegaanka Kuunto Barrow
Duqeyn lala eegtay Al Shabaab
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika